Hoyga Wararka Marar | Miyaad taqaana Magacyada iyo Waddamada ay ka soo jeedaan,Nimankii fuliyay hawlgalkii 11- Sep 2001 ?
Posted on September 16, 2015 by mararnews
Miyaad taqaana Magacyada iyo Waddamada ay ka soo jeedaan,Nimankii fuliyay hawlgalkii 11- Sep 2001 ?
14 sano ka hor, 11 September 2001 maxaa ka dhacay USA.
Miyaad taqaana Magacyada iyo Waddamada ay ka soo jeedaan, Nimankii fuliyay hawlgalkii September,11,2001 ?
Nimankii fuliyay hawlgalkii September,11,2001
Afar iyo tobban sano ka hor, 11-September 2001, waxaa weerar lagu qaaday waddanka Maraykanka, weerarkaas oo ay Qaadeen niman naftood hurayaal ah oo ururka #Al-qaacida ka socday.
Nimankaas oo ka koobnaa Sagaal iyo tobban nin, waxay burburiyeen daarihii Ganacsiga aduunka ee World Trade Center-ka loo yaqaanay, kuna yaalay Magaalada New York. Waxay kaloo burburiyeen qaybo ka mida Wasaarada Gaashaandhiga Maraykanka ee #Pentagon-ka, kuna taala caasimada Maraykanka ee #Washington.D.C. Diyaaradii Afaraad-se, meel cidla ah oo Gobolka Pennsylvania, ku taala ayay ku burburtay. Haddaba Sidee wax u dhaceen maalintaas? nimanka hawshaas fuliyayse kuwee ayay ahayeen?
Qoraalkan hoose ayaynu ku eegi doonaa.
Subaxnimadii hore ee 11-September 2001. waxaa qaybtii nabbad gelyada ee saddex ka mida garoomada diyaaradaha rakaabka ee waddanka Maraykanka, oo kala ahaa, Logan Airport, Dulles International Airport, iyo Newark International Airport, ka talaabay oo dhaafay baadhistii, 19 nin oo ka socday ururka AL-qaacida. 19-kaas nin oo ujeedadoodu ahayd inay afduubaan diyaarada Shacabka qaada ee Maraykanka.
Goor-sheegtu subaxnimadaas markii ay ahayd 7:59 a.m,Saacada Maraykanka, ayaa Diyaaradii u horeysey ee ay kooxdaasi Af-duubeysey oo ahayd Boeing 767. ayna lahayd Shirkada Diyaaradaha Maraykanka ee American Airlines, Duulimaad Numberkeeduna ahaa ,Flight 11. ay ka duushay Airporka, ku yaala Magaalada Boston, ee la yidhaahdo Logan Airport. Diyaaradaas oo usii jeeday Magaalada Los Angeles ee ku taala Gobolka California ee Maraykanka. Waxaana diyaaradaas Saarnaa 81 qof oo rakaab ah iyo 11 qof oo shaqaalihii diyaarada ahaa.
Shan iyo tobban daqiiqo ka dib markii ay diyaaradaasi kacday oo ku beegnayd 08:14 a.m. ayay hogaankii diyaarada la wareegeen koox afduubayaal ah, oo ka koobnayd shan nin, Uuna hogaaminaayay Maxamed Caata nin la yidhaahdo oo Masar u dhashay. Ninkaas oo ahaa Maskaxdii hawlgalka oo dhan kala hageysey, hogaaminayeyna.
08;23 a.m, Kabtan Maxamed Caata wuxuu is yidhi, rakaabkii diyaarada la haddal wuxuuse taabtay, button khaldan, taas oo keentay wixii uu rakaabka kula hadli lahaaba inuu ku dhaco oo gaadho, kantaroolka diyaaradaha ee Boston ARTCC. Maxamd Caata, haddalkiisii waxaa ka mid ahaa “‘ Waxaanu haynaa qorshe, fadlan aamus-naada, waxna idin gaadhi maayaan, waxaanu ku noqonaynaa Airport-ka”. Wax yar ka dib haddalkaas ayuu haddana Maxamed Caata hadlayaa oo odhanayaa “” Qofna ma dhaqaaqi karo, Wax waliba way hagaagayaan, haddii aad isku daydaan inaad wax dhaq-dhaqaaq ah samaysaan, waxaad khatar gelinaysaan, Naftiina iyo ta diyaaradaba!, ahaada qaar aamusan!!”. Mar saddexaad ayaa Maxamed Caata hadlayaa, markaas oo ay saacadu ahayd, 08.33.a.m wuxuuna odhonayaa ” Qofna ma dhaqaaqi karo! Fadlan! waxaynu ku noqonaynaa Airport-ka. ha isku deyina inaad wax dhaq-dhaqaaqa oo edeb daro ah aad samaysaan!!”‘.
Saacadu markii ay ahayd 08:46. a.m. ayuu Maxamed Caata oo diyaaradii uu waday ay ku soconayso, 748 km/h (Todoba boqol iyo sideed iyo afartan kiloomitir saacadii) uu si ulla kac ah diyaaradii ugu dhuftay, taawarka waqooyi ee dhismihii ganacsiga aduunka ee WTC, la odhan jiray. iyadoo diyaaradu ku dhacday, inta u dhaxaysa, Faloorka 93aad ilaa 99aad ee dhismahaas. Boqol iyo labba daqiiqo markii uu taawarkaasi gubanaayay ayuu dumay, markaas oo ay saacadu ku beegnayd 10:28 A.M, Subaxnimo. waxaana ku dhintay taawarkaas 1,600 oo qof dad lagu qiyaasay.
Haddaba magacyadii shantii nin ee diyaaradaas af-duubay waxay kala ahaayeen.
1. Maxamed Cawed Al-Sayid Caata. oo ahaa Kabtan-kii diyaarada la wareegay markii ay kooxdani Af-duubtay, ahaana Guud ahaan 19-ka nin, ninka hogaaminaayay. wuxuuu u dhashay Waddanka Masar, Gobolka Nile Delta. Maxamed Caata wuxuu dhashay September .1, 1968.
wuxuuna dhintay 11.September 2001. Da,diisuna waxay ahayd 33 sanno.
2. Cabdi Casiis Al-Cumaari, oo isna ka mid ahaa Shantii nin ee Diyaaradaas American Airlines Flight 11, afduubay , wuxuu dhashay May 28, 1979. wuxuuna ku dhashay oo uu ka soo jeeday, Gobolka Asir, la yidhaahdo ee Waddanka Sucuudi Areebiya. 22 jir ayuu ahaa markii uu dhintay, 11-Sept.2001.
3. Satam Maxamed Al-Suqaami. oo isna ka mid ahaa Shantii nin ee Diyaaradaas American Airlines Flight 11, afduubay, wuxuu dhashay June 28, 1976. wuxuuna ku dhashay kana soo jeeday, Magaalada Riyaad ee waddanka Sucuudi Areebiya. 25 jir ayuu ahaa markii uu dhintay, 11-Sept.2001.
4. Wacil Maxamed Al-shehri, oo isna ka mid ahaa Shantii nin ee Diyaaradaas American Airlines Flight 11, afduubay , wuxuu dhashay. July 31, 1973. wuxuuna ku dhashay oo uu ka soo jeeda, Gobolka Asir, la yidhaahdo ee Waddanka Sucuudi Areebiya. 28 jir ayuu ahaa markii uu dhintay, 11-Sept.2001.
5. Waliid Maxamed Al-shehri, oo isna ka mid ahaa Shantii nin ee Diyaaradaas American Airlines Flight 11, afduubay , wuxuu dhashay. December 20, 1978.wuxuuna ku dhashay oo uu ka soo jeeda, Gobolka Asir, la yidhaahdo ee Waddanka Sucuudi Areebiya. 22 jir ayuu ahaa markii uu dhintay, 11-Sept.2001..
Labbadan nin ee ugu danbeeya, ee Wacil iyo Waliid waa wallaalo ruma.
La soco qaybo kale oo maalintan ku saabsan
W/Q. Suleyman Yusufdhakhtar